Indlabeyiphika ibeka uMaskandi ezingeni eliphezulu kakhulu | isiZulu
Kuzohlekwa waya-waya eThekwini ngempelasonto
Kuhlelwa umcimbi wokukhumbula kanye nokubungaza uBob Marley eThekwini
eThekwini - Adayisa okwamangwinya ashisayo ebusika amathikithi endumezulu yomcimbi kaMaskandi ozokuba seGoli ngenyanga ezayo.
UMthandeni “Igcokama Elisha” Manqele ongumculi othandwa kakhulu kuMaskandi ukhuphule kakhulu izinga lokusebenza kwakhe ngalo mcimbi ozokuba ngomhlaka-21 kuMbasa 2018 enkundleni yezemidlalo i-Ellis Park Stadium.
Kumenywe nabanye abaculi abafana noSjava noKid X abazokweseka lo zakwabo ekufezeni izifiso zakhe.
UMpilo Manyathi okunguyena mhlelo nomxhumanisi wabezindaba uthi mukhulu umsebenzi abawenzile ikakhulukazi njengoba bengenabo abaxhasi.
"Kuyintokozo kuthina ukuba sizuze konke lokhu futhi njengoba amathikithi ethengwa ubuthaphuthaphu nje lokhu kusibonisa ngkusobala ukuthi abantu bayawuthanda uMaskandi. Muningi umsebenzi esesiwenzile ikakhulukazi njengoba singenabo abaxhasi, konke esikwenzayo sikwenza ngamandla ethu,"kusho uManyathi.